Mpitendry Milina Fanoratana Nentim-paharazana Maharitra Hatramin’ny Taonjato Faha-21 Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Mpitendry Milina Fanoratana Nentim-paharazana Maharitra Hatramin'ny Taonjato Faha-21 Ao Myanmar
Voadika ny 29 Avrily 2016 4:27 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, Română , English
Vehivavy mpitendry milina fanoratana miasa mamita antontan-taratasy ao amin'ny trano hevany amoron-dalana ao Maha Bandoola Park Road. Tahaka ireo mpitendry milina fanoratana tsy mitsaha-mitombo ao Yangon, miankina amin'ny milina fanoratana ny asany, saingy mampiasa smartphone kosa izy rehefa ho an'ny tenany. (Sary sy fanazavana: Tin Htet Paing / The Irrawaddy)
Ity lahatsoratra nosoratan'i Tin Htet Paing sy Sally Kantar ity dia avy amin'ny The Irrawaddy, tranonkalam-baovao tsy miankina ao Myanmar, ary navoaka eto amin'ny Global Voices indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mandritra ny tolakandro, mipetraka eo anoloan'ny milina fanoratana efa tamin'ny vanim-potoanan'ny ady mangatsiaka i Tin Zaw Htet, voahodidina antontan-taratasy malama sy miloko sary ary mari-pankasitrahana ara-dalàna mihantona eo ambanin'ny masoandro maherin'i Yangon.
Ao amin'ny farany ambanin'ny Lalan'ny Zaridaina Maha Bandoola, mpitendry milina fanoratana marobe no mitandahatra ao anatin'ny trano heva tsizarizary manokana eo akaikiny. Mahazo vola hivelomana ao anatin'ny asa birao mitaky antontan-taratasy amin'ny endrika sora-milina fa tsy amin'ny sora-tanana izy ireo, saingy ao amin'ny an-toerana izay mbola haitraitra ny solosaina sy ny pirinty ary tsy azo ianteherana ny herinaratra.
Mampiseho mari-pahaizana voafono plastika manamarina ny fahavitany fiofanana momba ny fitendrena naharitra iray volana tao amin'ny foibe fanofanana arak'asa i Tin Zaw Htet , dimy taona lasa izay. Rehefa nahazo diplaoma izy, dia nandao ny asa fivarotana trondro fiompy ary niaraka tamin'ny nenitoany, mpitendry milina fanoratana ihany koa, mba hanokatra ny trano hevan'izy ireo manokana.
“Te hiasa fotsiny amin'ny fandraharahana ahy manokana aho, na dia tsy maintsy mitantana izany eny amoron-dalana aza”, hoy izy.
Mandray 1.000 kyats (0,83 dolara Amerikana) isaky ny pejy ity vehivavy 28 taona ity amin'ny famenoana taratasy fanamarinam-panambadiana, taratasy fisoloan-tena sy taratasy fifanarahana ara-pitsarana hafa miaraka amin'ny sora-milina amin'ny teny Birmana na Anglisy; mahazo asa eo amin'ny pejy 10 sy15 eo ho eo izy isan'andro.
Nafarana tany Alemaina Andrefana tamin'ny fiandohan'ny taona 1960 ireo milina fanoratana ampiasaina eny an-dalamben'i Rangoon. Matetika imbetsaka namboarina izy ireo nanomboka tamin'izany ary nohavaozina (Sary sy fanazavana/ The Irrawaddy)
Mamitaka ny taonan'ireo milina fanoratana nanosika ity sehatra kely ity ny takelaka kely vita sokitra ahitana fehezanteny hoe “Vita tao Alemaina Andrefana”. Antitra mitovy amin'ireo milina fanoratana namboariny fony izy 13 taona i Win Htay, dimampolo taona, izay nanavao ny milina fanoratana. Milaza izy fa ireo no voalohany nafarana ho an'ny mpiasam-panjakana Birmana teo ambanin'ny fitondrana U Nu na Ne Win tamin'ny fiandohan'ny taona 1960.
Natao lavanty, nohavaozina ary namidy indray am-polony taona, mampiseho ny maha-lany andro azy ireo ao Birmania ny firafitry ny vy mafy, na efa miankina tanteraka amin'ny solosaina aza ankehitriny ny biraom-panjakana nividy azy ireo tany am-boalohany, miorina tsy latsaky ny 320 kilometatra ao avaratra ao Naypyidaw. Ao amin'ny toeram-piasana tsotsotra ao amin'ny lalana faha-35 ao afovoan-tanànan'i Rangoon, mbola mivarotra azy ireo i Htay Win, nohavaozina tanteraka izy ireo ary manodidina ny 100.000 kyat (83 dolara Amerikana) ny vidiny. Hoy izy:
Miraiki-po tanteraka amin'ireo milina fanoratana ireo aho. Ity no zavatra tena mba haiko. Tsy aiko akory na ny mandray solosaina aza.
Tin Zaw Htet (eo aloha) mameno antontan-taratasy ao amin'ny milina fanoratany raha mijery kosa ny mpitendry hafa, miandry mpanjifa na asa azo zaraina. Ny teritery lehibe atrehin'izy ireo, hoy izy, dia, “tsy mahazo manao fahadisoana,” satria araka ny nolazainy, “tsy misy bokotra famafana ny milina fanoratana.’” (Sary sy fanazavana: Sally Kantar / The Irrawaddy)
Vehivavy mpitendry milina fanoratana eo am-perinasa. Raha sokajiana fa sehatra anjakan'ny lehilahy lehibe izy ity. Nahita vehivavy sy lehilahy amin'ny sarangan-taona samihafa mitendry ireo antontan-taratasy eny amin'ny trano hazo eny amoron'arabe kosa ny Irrawaddy. (Sary sy fanazavana: Tin Htet Paing / The Irrawaddy)
Ao amin'ny lalana Pansodan ao afovoan-tanànan'i Yangon, mpitendry milina fanoratana mameno antontan-taratasy ara-pitsarana ao amin'ny fiasany amoron-dalana. (Sary sy fanazavana: Tin Htet Paing / The Irrawaddy)
Raha nanomboka nafindra avy any Yangon ho any Naypyidaw ny biraom-panjakana tamin'ny taona 2005, nitaraina i Win Htay fa mpanamboatra sy mpitendry milina fanoratana te hivoatra marobe ihany koa no namindra ny asan'izy ireo sy ny milina fanoratan'izy ireo, ary tany amin'ny renivohitra vaovao lavitra be no nifindran'izy ireo. Niaro tena izy raha nanontaniana momba ny toeran'ny milina manoloana ny fitomboan'ny fifantenana fitaovana maoderina kokoa, manantena hatrany ny fitohizan'ny fianteherana amin'ny milina fanoratana eny amin'ny fitsarana, sekoly sy ny biraom-panjakana indrindra any amin'ny faritra ambanivohitra ao amin'ny firenena. Tokony ho 70 isanjaton'ny mponina ao Myanmar no mbola tsy mahazo herinaratra ilaina handefasana fitaovana vaovao kokoa.
“Ranomainty no tena ilain'izy ireo,” hoy izy nanipika, vavolomben'ny faharetan'ny milina fanoratana.
Manaiky i Tin Zaw fa indray andro any, mety tsy maintsy hampifanaraka ny asany hifameno amin'ny fivoaran'ny teknolojia izy, saingy nilaza izy fa tsara vintana: Mahay ny fomba fampiasana solosaina ihany koa izy. Na izany aza, tsy fiovana ho ankasitrahany tanteraka izany. Hoy koa izy:
Manosika anay ny [milina fanoratana] mba hahomby kokoa, mijery ny fahadisoanay ao amin'ny taratasy, ka mitandrina kokoa izahay mba tsy hanao fahadisoana.
Mamaritra ny fahafaham-po amin'ny fiasana amin'ny milina tranainy ihany koa izy.
Tsy mitovy ny fahatsapana fampiasana milina fanoratana sy ny fampiasana ordinatera. Afaka mahatsapa tamberina be dia be avy amin'ny bokotry ny milina fanoratana izahay. Miteraka tabataba izy. Karazana toy ny hoe tiavo izy.
Azo inoana fa hanohy hihazona ny lanjany mihoatra ny fanembonana ny lasa ny milina fanoratana nentina tao Birmania nandritra ny vanim-potoana teo aloha, ary amin'izao fotoana izao, miasa amin'ny tontolon'ny teknolojia ao amin'ny firenena.
Lehilahy miasa amin'ny antontan-taratasy mampiasa milina fanoratana mandeha herinaratra ao an-tsena ao afovoan-tanànan'i Yangon. Raha matetika mijanona eny ivelany akaikin'ny fitsarana sy ny biraom-panjakana ny mpitendry milina fanoratana nentim-paharazana, misokatra eo amin'ny manodidina kosa ireo tsena kely anatiny, ahitana milina fanoratana maoderina, sy pirinty sy solosaina koa. (Sary sy fanazavana: Tin Htet Paing / The Irrawaddy)
Ao amin'ny tsena kely ao amin'ny Lalana 35, manamboatra ireo milina fanoratana simba novidiana tamin'ny lavantim-panjakana i Mya Win, 62 taona, Niasa tamin'izany nandritra ny 40 taona izy. (Sary sy fanazavana: Sally Kantar / The Irrawaddy)